Lighting Led, Led panel Light, Led Linear Light - Lightman
Ihe Mere Họrọ Lightman
Nleta ụlọ ọrụ
Ikanam oriọna ikanam
Igwe Ọdụdọ LED Light
Light Light ikanam panel panel
Light UL & DLC LED panel Light
Ìhè LED Panel ọkụ Dimmable
Igwe ọkụ CCT Tunable LED Panel
Light Light panel panel panel
Ìhè Ngbanye Ọdụdọ N'ịgbanye ọkụ
Ikanam ke Nkanam Etop
Gburugburu Light panel Panel ala
Mpempe akwụkwọ mpịachi okirikiri Square
Light Light Round LED Panel Light
Light Light Square Panel panel
Light Light panel panel abụọ
Nnukwu gburugburu na-eduzi ìhè panel
Ìhè akara ọkụ
Akwụsịtụrụ Light Linear Light
Elu ala Linear Lighted LED Linear Light
Ọkpụkpọ UVC Sterilizer
Oriọna UVC-A Sterilizer
Igwe ntuali UVC-C
Fakị UVC Sterilizer Wand
UVC Sterilizer Wand na-ejide aka
Igwefoto UV Sterilizer Lamp
Igbe UVC Sterilizer
Igwe Ọkụ Anụ Ahụ Atụrụ UVC Sterilizer Lamp
UVlọ mposi UVC Sterilizer
Officelọ Ọfịs & Nzukọ
Educationlọ akwụkwọ na Mahadum
Carelọ Ahụike & Ahụike
Shoplọ ahịa & ụlọ ahịa & ụlọ ahịa
Mgbatị & Ebe Egwuregwu
Stationzọ ụgbọ oloko & ụgbọ oloko
&Lọ & Ndị ọzọ
Ngwa eji egbochi mmiri
Ngwa Egwuregwu Frameless
Ngwa RGB & RGBW & RGBWW
Ngwa Ihe Ntugharị Egwuregwu Kọmputa LED
Nnukwu Ogwe Nhazi
Ngwa Nhazi Light Light Panel
Ntuziaka Ntinye Ngwaahịa
Onye na-emeputa ahụmịhe nke nwere ahụmịhe afọ dị iche iche na-eduzi ọkụ na-eduzi. Onye nrụpụta dị ike nke nwere akụrụngwa ngwaahịa zuru oke na-ekpuchi ọtụtụ ụdị ọkụ na-eduzi. Onye amuma nwere ikike ime ka uzo nile nke oku di ndu nke oma. Onye nrụpụta pụrụ iche nke na-eduga na-achụ afọ ojuju ndị ahịa ruo mgbe ebighi ebi!
ỌZỌ & ETLỌ ụlọ
Lightman duuru oriọna dị nro ka ọkụ a na-ahụ maka ya na imepụta ihe ọgbara ọhụrụ na-ewepụta arụmọrụ dị mma na usoro ike ọrụ, Lightman luminaires setịpụrụ ụkpụrụ. Ihe ndị na-eme ka ọkụ na-enye ọkụ na-eme ka arụ ọrụ rụọ ọrụ karịa, nwekwuo ọkwa ọdịmma n'ọfịs ma belata oke arụmọrụ.
Igwe ọkụ IP65 mkpuchi ọkụ
IP65 LED panel panel e mere maka ngwa n'ime uzuzu ma ọ bụ mmiri ma ọ bụ keguru mmiri ebe tupu nke a agaghị ekwe omume na nkịtị ogwe. Ọ dị mma maka ebe mmiri dị, dịka ime ụlọ ịwa ahụ, friza na kichin, ebe a na-asa akwa wdg Ọ dịkwa mma iji gboo mkpa ụlọ dị ọcha.
Ọ nwere ike dozie agba RGB ma gbanwee ụcha agba ahụ site na ọcha na-ekpo ọkụ ka ọ dị ọcha dị ọcha na ọrụ na-enweghị atụ. Ogologo akara ikuku ikuku ikuku nwere ike iru mita 25-30. Ihe njikwa aka na akara ekwentị ekwentị dị. A na-ejikarị ya na ụlọ ihe nkiri, KTV, mmanya, skating rink, hotel, kindergarten, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ebe ntụrụndụ.
Uredị dị iche iche maka nhọrọ iji chọọ mma n'akụkụ na njedebe okpu Mkpokọta enweghị nkebi maka ogologo ejiji ọla ọcha, agba ọcha ma ọ bụ ụcha ojii maka nhọrọ ahaziri, ogologo 2400mm
Gburugburu Light Light panel Panel
Jikọta LEDs na -eme ka ọkụ na Mitsubishi PMMA LGP dị mbubata maka ultra-tin, Mpempe mkpuchi enweghị ngbanwe na ntinye dị mfe maka ngwa.
Grakwalite otu ngwa na LED nwere ike ichekwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 7 kwa ọnwa.
IGBO ji ike 85% na halogen na 18% erughị CFL.
LED na - enweta ọkụ zuru oke n'otu ntabi anya, na enweghị friji ma ọ bụ ikpo ọkụ.
Ike ịnye ọwa ọkụ zuru oke.
AC100 ~ 277V 50W kwụsịtụrụ LED Flat Ceiling Panel Light 2 × 2
AC220-240V SMD2835 60W 600x600mm Backlit LED Ceiling Panel lamps 60x60cm
Lighting 60W Recessed LED Flat Panel Light 120 × 30
Akwụkwọ ikike afọ 5 54W Square LED Slim Ceiling Panel Light 60x60cm
Banyere Shenzhen Lightman
Shenzhen Lightman Optoelectronics Co., Ltd bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke steeti nwere ụlọ ọrụ na-enyocha ma na-enyocha LED. N’afọ 2012, Lightman guzobere ụlọ ọrụ OEM “LED panel Lighting Co., Ltd.” nke ahụ na-eme iwu OEM maka ụlọ ọrụ ọkụ na nke ụlọ. Companylọ ọrụ ahụ amatala na teknụzụ ọkụ ọkụ LED nke ọkụ ma na-enye usoro dị mma nke ihe ngbanye ọkụ ọkụ LED.
Owuwu ulo oru, ulo uka nke ato, Guangming District, Shenzhen City, Guangdong Province, 518106, PRChina